10 Days Switzerland Travel yohambo | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Days Switzerland Travel yohambo
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 31/12/2019)
abahambi inkanuko uyazi indlela ekubaluleke ngayo ukuba hambo elungileyo. Xa bazijongisise imephu, into eqinileyo icebo yokuhamba, kwaye okubaluleke kakhulu, Imisebenzi emangalisayo - nawe ezimiselwe yakho 10 uhambo lweentsuku Switzerland. Kwaye xa uhamba nge Europe, uloliwe kungathatha nawe naphi na. Abo banqwenela ukuya explorre Switzerland kufuneka sibe nesicwangciso kuba ilizwe izaliswe izinto oluhle. Ukuba ufuna uncedo okanye iphefumlelwe ukuza eyakho, makhe jonga kwi 10 iintsuku Switzerland travel uhambo:
Usuku 1 of wakho 10 Days Switzerland Travel yohambo – Geneva
Le ndawo lapho uqale uhambo lwakho azifani, kodwa zimisele umoya omawulawule ngethuba lonke sokuhlala kwakho. abahambi Inkoliso Sicebisa eqala nokuba eGeneva okanye Zurich kuba imizi emikhulu zokuhamba izikhungo. Yintoni egqithisile, ungazama olu hambo umva ukuba ungathanda - into ebalulekileyo kukuba wonwabe!
Ukuba ufike kwi eGeneva kuqala, kukho inkitha izinto ukubona ngosuku lwakho lokuqala Switzerland. Sincoma kohambo Old Town kunye Centre City. Ngaphezu, i Treille Promenade kunye isihlalo yeZizwe eziManyeneyo nazo izinto ezinkulu.
Lyon ku Basel Uqeqesha
Paris ku Basel Uqeqesha
Ilusini ku Basel Uqeqesha
Usuku 2 – Lake Geneva
Ukuqalisa eGeneva ikunika ithuba elikhethekileyo ukunamathela ngeenxa Lake Geneva ithutyana elide. Ngokuba ufikile umhla wesibini e-Switzerland, bekuya kuba zikulungele kutyelela kwidolophu Montreux, wona kufutshane elwandle.
Mfutshane kuphela train ride kude eGeneva, kwaye Loxwebhu. Yintoni egqithisile, abo bamthandayo iinqaba ephakathi ziya khulu yi Chateau de Chillon, nabathandi nemvelo uzoba onwabele chibi.
Usuku 3 – Zermatt – Alps, Swizalend
Ukuchitha ixesha eSwitzerland ngaphandle ndibona ubuhle bendalo Alps bekuya kufana nokuya gourmet yokutyela kwaye hayi-odola ukutya. Kwaye akukho sizathu ukuphoswa xa i ekuqaleni train ekuseni angakusa Zermatt. ukusuka apho, adventure yakho Alps ungakwazi ukuqala.
Kukho nokuninzi kokwenza Zermatt ukuba Imozulu intle ngokwaneleyo. Sincoma amaholo iiyure-3 emhlabeni amachibi ezintlanu, eqala Blauherd. Kuyinto uhambo omhle kunye nendlela enkulu Alps yakho amava.
Usuku 4 – Zermatt – Kwakhona NgoSuku 4 of 10 Days Switzerland Travel yohambo
Ungathatha imini yakho lwesine ukuhlola Zermatt ngokupheleleyo, njengoko oku yenye ene- Swiss yasentabeni iidolophu. Kukho i umfula omangalisayo ukubona, kwaye Matterhorn ukuba ukujonga. Xa wena a enamava umntu othatha uhambo olude lokusel'umoya, ungangenisa emva kwemini ukuze ubone Charles Kuonen Bridge Ukumiswa.
Ngalo nto, kuza kufuneka ukuba uye Randa, apho ngeenyawo ukuya ibhulorho iqala. Yinto malunga uhambo iiyure-2 ukuya ibhulorho. Ku nga kwindlela lula ukuba ukugqiba, kwaye bridge ngokwayo hayi amandla kwentliziyo. kunjalo, bebona kufanelekile inkathazo.
Basel ukuba Uqeqesha Bern
Usuku 5 – Matterhorn Glacier
Lokuzibonela ngokupheleleyo Alps, kufuneka uthathe ithuba ukukhwela ezise zintabeni. Zermatt kuba njengendawo yokuqala enkulu ukuba, njengoko lula ukufikelela zombini Matterhorn Glacier Paradise kunye Gornergrat ukusuka apho.
Kuthatha ezinye iilifti ukufikelela encotsheni Matterhorn Glacier Paradise okanye ukukhwela ku Gornergrat uloliwe. omabini la uhambo losuku ukunikela iimbono kwakuhle Alps, kwaye kukho abathile ukuhlola ukwenza kanye ube khona, kakhulu.
Basel ku Chur Uqeqesha
Bern ku Chur Uqeqesha
ETurin ku Tirano Uqeqesha
Usuku 6 – Schilthorn Swizalend
Kuba umhla wesithandathu uhambo lwakho Switzerland, lixesha ukubamba ezinye iimbono mihle ngakumbi Schilthorn. Catch imoto intambo Schilthorn ukusuka Murren kwaye babe konke oko kufuneka anikele. A restaurant kwamaphiko, inala namaqonga ukubukela, kwaye nkqu Bond World unako konke kufunyanwa apha.
Schilthorn kwanele ukuba ugcwalise le ngosuku lonke, kodwa ukuba wena uziva entsha, khangela Lauterbrunnen ngokunjalo. Yinto uhambo kwintlambo eqaqambileyo ezele zokumisa dolophana kunye neembono seengxangxasi yasentabeni.
Usuku 7 – indawo Jungfrau
Usuku 7 ebeya kuba ufezekile ukuze ayolule utyelelo lwakho kummandla Jungfrau ugcine ukuhlola Alps. Kukho ezinye bentaba athandwayo ungangenisa e Grindelwald. Imoto cable angakusa Mountain First, apho ukhethe enye kwiindlela ezininzi intaba ezikhoyo.
Enye izezona ethandwa Akuthandabuzeki ukuba Bachalpsee Lake ukwenyusa, nto leyo lokuya nokubuya ukuba ithatha e 2 iiyure. kunjalo, kukho inala ezinye izinto yokuQala, ngoko qiniseka ukuba aqhelane indawo kakuhle.
Usuku 8 – Wengen
Isiseko usuku lwakho wesibhozo 10 Days Switzerland ezinika ngokuxilonga ingaba Wengen, idolophu encinane yasentabeni. Ngoxa kule ndawo, u nga ukuhlola Mannlichen ngokuthatha imoto cable phezulu entabeni kunye nokuhamba migudu. Kukho abanye intriguingly igama, ezifana the Royal Walk.
I Panorama Trail ukusuka Mannlichen ukuya Kleine Scheidegg yeyona kakhulu lihle Nye. it inikeza imibono kwentili ngezantsi kunye iintaba ezintathu adumileyo - i Jungfrau, Monch, no Eiger. Ukusuka Kleine Scheidegg, ukuthatha uloliwe wabuyela Wengen.
I-zurich ukuba Wengen Oololiwe
Geneva ukuba Wengen Oololiwe
Bern ukuba Wengen Oololiwe
Basel ukuba Wengen Oololiwe
Usuku 9 – ilusini
Sondela ekupheleni kwakho 10 Days Switzerland Travel yohambo, uya ufuna ukwenza indlela yakho emva waya emizini. Ngokuba imini 9, sincoma ukutyelela Lucerne, njengoko isixeko ogqibeleleyo ukuhlola ngeenyawo. Emva kokuba bonke nokunyuka, ke izakuba ukuba izimuncumuncu ku kwuma i kwizitalato befuna izinto efana Church of St. Leodegar, Museggmauer kunye Ngonyama Monument.
Ilusini has a ngakumlambo omkhulu nenala yezinto ezintle. Ngaphezu, yeyona yokumisa enkulu lakho lokuya Zurich, apho uya khona zokuyeka utyelelo.
Usuku 10 – Zurich kunye nosuku lwethu lokugqibela 10 Days Switzerland Travel yohambo
imini lakho lokugqibela kufuneka ibe enye epheleleyo, kunye Zurich yindawo efanelekileyo ukuba sisisebenzise. Sebenzisa ixesha ukubona abaninzi yayo yomlando izinto, ezifana amabandla of Grossmunster and Fraumunster.
Kwakhona Zurich inemisebenzi odumileyo street shopping ukunikeza, ngoko qiniseka ukuba uthenga into kwi Bahnhofstrasse. Hamba nge Old Town kwakunye nabakonwabelayo ukufunda ngokuxilonga phambi kokuba ubuyele ekhaya.
Nantoni na ukhetha ukuyenza Switzerland, uza kuba ixesha ubomi bakho. Khumbula nje ukuba bacwangcise imisebenzi yakho, zokuhamba, kunye nobude ahlale ngenyameko. Oko kuza kuqinisekisa ukuba zakho iholide kuba nobunzima-free kunye lomse- ngokwenene, njengoko kumele kube.
Basel eGeneva Uqeqesha
Switzerland lilizwe elihle yonke umhambi kufuneka ukuba. Ingaba ukulungele ukuba 10 travel Days Switzerland? Book amatikiti etreyini yakho ngoku makhe ngokwakho utshayelwe ngobumnandi!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Days Switzerland Travel yohambo” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-days-switzerland-itinerary%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#traveleurope europetravel I-SwissAlps trainjourney train Travel indawo yokuhamba